सुविन भट्टराईको लकडाउन डायरी- फिचर - कान्तिपुर समाचार
तर, संसारभरै फैलिएको आतंकले मेरो मनभित्र पनि अलिकति ठाउँ त ओगटेकै छ। डर छ। र, त्यही डरले त चेतनाको पर्दा उघारिदिएको छ।
जस्तोसुकै विषम परिस्थितमा पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ भनेर धेरै पुस्तक र सिनेमाले सिकाएका छन्। धेरै मानिसका भोगाइ र जीवनले बुझाएका छन्। तिनलाई हेरेर, बुझेर अलिकति त जानिएकै छ।
लकडाउनको आज तेस्रो दिन पुगिसकेको छ। त्यसो त पाँच दिन भैसक्यो होला घरको गेट खोलेर पनि बाहिर निस्किइएको छैन। झन्, दिमागमा के परिसक्यो भने, गेट खोल्नेबित्तिकै मानौँ एम्बुस थापिएको छ। मानौँ बम फट्नेछ। यसरी आफूलाई तर्साइएको छ। नभए त मन मात्तिन के बेर !
दिनमा डेढ घण्टा डाँडातिर सल्लाको जँगल भएको बाटो हिँड्ने बानी परेको मलाई यति एउटा कुरामा भने लकडाउनले गहिरो प्रभाव पारेको छ।
आजकालका बिहान बडो अद्भूतका छन्। सधैँ बाइकको टाँटटाँटटुँटटुँट, अझ बुलेटको घट्ट्ट्टटट, गाडीका पिँपपिँपहरुले अनि मान्छेका होहल्लाले निद्रा ब्यूँझन्थ्यो। केही दिनदेखि चराहरुको चिरबिरले ब्यूँझाउन थालेको छ। झ्यालबाट खुसुक्क छिरेको ताजा हावाको स्पर्शले ब्यूँझाउन थालेको छ।आफ्ना नित्यकर्महरु सकेर चियाको टेबलमा बसिरहँदा कोठाबाट बाहिर देखिने दृश्यले बडो लोभ्याएको छ।
पचास मिटर पर पनि धुलोले धमिलो देखिने दृष्य दूर–दूरसम्म स्पष्ट छ। आकाश सफा छ। झन् त्यहाँमाथि वसन्त ऋतु। हर एक बिरुवामा पलाएको पालुवाले मन आनन्दित बनाएको छ।
साँच्चै एभोकादोको रुखमा कत्ति चराहरु बस्न आएका रैछन्। मेरो घर वरपर यति धेरै चराहरु गीत गाउँदै नाचेको जीवनमै पहिलोपल्ट सुनिरहेछु/देखिरहेछु। कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बसेँझैं महसुस भइरहेछ। दिनैभरि, कुनै आवाज छैन। धुलो छैन। मान्छे छैनन्। हल्ला छैन। आधा घण्टाजतिमा एउटा बाइक वा गाडी पास हुन्छ। यत्ति !
नभए यति शान्त माहौल छ कि पचास मिटर पर बोलेका मान्छेहरु, आफ्नै घरको गेटअघिल्तिर बोलिरहेझैँ प्रतीत हुन्छ।
लाग्छ, सन्नाटाजस्तो श्रुतिमधुर चीज संसारमा सायद अर्थोक छैन।
तर यी सन्नाटाहरु, यो प्रदुषणरहित मौषम, यो ऐकान्तिक माहौलको आनन्दले मात्र पेट भरिन्न। नीलो आकाश हेरेर भोकले अँध्यारो पारेको अनुहारलाई कति राहत दिन्छ? सडकमा गाडी नकुदे पनि मनमा डरका एम्बुलेन्सहरु तीखो साइरन बजाउँदै कुद्छन्।
जोहो गरेका खानेकुराले केही दिनका केही छाकहरु त टारिदेला, त्यसपछि के? छिटै हरेक नागरिकका पेटले प्रश्न गर्न थाल्नेछन्। के सरकार समाधान दिने तयारीमा जुटिसक्यो? कोभिडको महामारीमा भीड बिनाको बजारको दृश्यको कल्पना सरकारले कसरी गरेको छ? जनताले कसरी गरेका छन्? कोरोनाको त्रास र भोली, पर्सीका अनिश्चित छाक सम्झेर अहिलेदेखि नै कतिको मन अमिलो हुँदो हो। ज्यलादारी मजदुरका मजबुरीलाई सरकारको संवेदनाले छुन्छ कि छुँदैन? प्रश्नैप्रश्न छन्। अन्यौलै अन्यौल छन्।
आंतंकहरु एकपटकमा एउटा मात्रै कहाँ आउँछन् र? ती जन्तीको लर्कोझैं लाइन लागेर आउँछन्।
भय आफ्नो ठाउँमा छ। जिन्दगीको लय आफ्नै ठाउँमा छ। चित्त बुझाउनै पर्छ। धेरै समस्याहरु बितेर गए। यो पनि बितेरै जानेछ।
दसजनाको परिवार छ। तीनजना केटाकेटी छन्। आज बिहान आँगनमा गएर एकएक फूल हेर्दै, तिनमा आएका पालुवा हेर्दै रमाउँदै, अनि आँपको बोट नियाल्दै एभोकादोको पात सुम्सुम्याउँदै वरपर डुलियो।
अनि त्यसपछि उनीहरुसँग चुङ्गी खेलेर केही समय बित्यो। अलिकति भए पनि पसिना आयो। त्योभन्दा पनि बढी केटाकेटीसित हाँसो ठट्टामा बित्ने समयले संसारको धेरै दुःख र सन्ताप भुलाउने सामर्थ्य राख्दोरैछ।
थाकेर फर्केपछि सबैले साबुन पानीले मिचिमिचि हात धोयौँ। थाहा छैन महामारीले त्रसित बनाएको हो कि ओभर कन्सियस, (या कन्सियस) केही नयाँ चीजमा हात पर्‍यो कि धोइहाल्न पर्ने।
खाना खाँदा टेबलमा खानासँगै अलिअलि गफ कोरोनाका पनि हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा हामी धेरै जो अल्मलिएका छौँ।
खाना खाइसकेपछिको समय बडो अल्छीलाग्दो हुन्छ। तर, त्यै समयमा हो फिल्म, सिरिज हेर्ने। मूड चल्दा पहिलो ड्राफ्ट लेखेर सकाइसकेको पुस्तकमा काम गर्छु। कुनै बेला बुकसेल्फबाट कविताको कुनै किताब निकाल्छु र एक दुइवटा कविता पढ्छु।
हिजोदेखि सुरु गरेको नेटफ्ल्क्सि सिरिज ‘सेक्स एडुकेसन’ करीब करीब सकिनै लागेको छ। रमाइलै छ। यस्तो बेला हरर र थ्रीलरभन्दा कमेडी र इन्सपायरिङ सिनेमा/सिरिजहरुले मूड राम्रो बनाउँछ। त्योभन्दा अघि हेरेको ‘असुर’ ले खल्बल्याएको दिमाग यो सिरिजले ठीक ठाउँमा ल्याइदियो।
सानो छोरा सुतेको बेला, ऊ वरपर परिवारका अरु सदस्यसित खेल्न गएका बेला फुत्त निस्किएको समयलाई सदुपयोग गर्दै केही हेरिन्छ। नभए छोराको ध्यान राख्दा, ऊसित खेल्दा नै कति समय बितिसकेको हुन्छ पत्तै हुन्न।
यो निश्चय पनि हो कि शरीरलाई घरभित्र थुनिएको छ। तर मन कहीँ थुनिएको छैन। दिमाग कुनै हालतमा थुनिन मान्दैन। रहरहरु अटेरी छन्। तिनलाई दिनुस्, घरको गेट खोलेर बाहिर निस्कनलाई। तिनलाई छाडिदिनुस् उदात्त, उन्मुक्त भइ सडक, गल्ली, चोक, पब अनि खुल्ला मैदानमा। तिनलाई चढाइदिनुस्, बस, प्लेन अनि पानीजहाजमा, जाऊन् कहाँ जान्छन्। गरुन् जे गर्छन्। निस्फीक्री छाडिदिनुस्।
बस् ! शरीरलाई मात्र रोक्नुस् र राख्नुस् घरभित्र। र देखिरहनुस् सपना। हुर्काइरहनुस् योजना। तिखारिरहनुस् क्षमता। भोलि जब चलायमान हुनेछ संसार, पँखेटा फिँजाएर उडौँला नि ! प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १६:२६
खाद्यवस्तु घरघर पुर्‍याउन गृहको निर्देशन
‘खाद्यवस्तु ओसार्न आवश्यक पर्ने सवारी पास प्रशासनबाट लिनू’
काठमाडौँ — सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमा पुर्‍याउन उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट, ग्रोसरी तथा अन्य होलसेल पसल सञ्चालकहरुलाई बोलाएर सरकारले उपभोक्ताको मागअनुसार लकडाउन अवधिभर घरघरमा खाद्यवस्तु पुर्‍याउन निर्देशन दिएको हो ।
सामान किन्न जानेलाई भीडभाड नगरी पसल पुगेर फर्कन र अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको तर लकडाउन पालनामा अझै अटेर भइरहेकोले होम डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको आपूर्ति, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन होमडेलिभरीको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
‘लकडाउन अवधिभर सर्वसाधारणलाई घरघरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु डेलिभरी गर्न निर्देशन दिएका छौं, हाम्रो व्यवसायीहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ,’ शर्माले भने। व्यवसायीलाई होम डेलिभरीका लागि टोल फ्रि नम्बर, कार्यालयको नम्बर वा नजिकै रहेका वडा कार्यालयको नम्बरमार्फत उपभोक्तासँग सम्पर्क व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको शर्माले भने। उपभोग्य वस्तुको होमडेलिभरीमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको शर्माले बताए। ‘खाद्य पसलहरुलाई उपभोक्तासम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने सहजीकरण गर्न स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय र खाद्य पसलहरुकै सम्पर्क नम्बरको व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘व्यवसायीहरुले पनि छिट्टै होमडेलिभरीका लागि काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।’
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेज्को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै खाद्यवस्तुको डेलिभरी भ्यानबाट घरघरमा पुर्‍याउने, सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। प्रशासनले आवश्यक मात्रामा सवारी पास दिने तथा पसल सञ्‍चालन, माग संकलन र वितरणमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि सुरक्षाकर्मी, खाद्यबिक्रेता तथा स्थानीय तहले माइकिङलगायतबाट पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
गृहले जटिल घडीमा कुनै समस्या परेमा त्यसको समाधान तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव गर्नेको सूचना दिन पनि ११४९ नम्बर वा सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा खबर गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। लकडाउनका बेला मानिस आवतजावत निषेध गरिए पनि सरकारले दूध, दाल/चामल, पानी, तरकारी, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीलाई खुकुलो बनाएको छ।
सरकारसँगको छलफलमा व्यवसायीहरुले लकडाउन अगावै सर्वसाधाराले करिब महिना दिनसम्मलाई खाद्यवस्तु जोहो गरेकोले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नहरेको बताएका थिए। हरिया सागसब्जी, दूध, पानीबाहेकका खाद्यवस्तु उपभेक्ताले लकडाउनभन्दा अघि नै पर्याप्त मात्रामा जोहो गरिसकेको धारणा सरकारलाई सुनाएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
भारतबाट सामान ढुवानीमा समस्या परे सेनालाई त्यसका लागि खटाउने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको उद्योग/वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‍) को मिति 2076/12/09 गतेको निर्णय बमोजिम संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा2अनुसार मिति 2076/१२/११ गते बिहान ६ बजे देखि लागु हुने गरी जारी गरिएको आदेशको बारेमा सबै नागरिहरुलाई अवगत नै छ। उक्त आदेश बमोजिम विश्‍व्यापी रुपमा संक्रमण भइरहेको कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट आफु सुरक्षित हुन र अरुलाई पनि सुरक्षित बनाउन सबै नागरिकहरुले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नुहुनेछ भन्‍ने कुरामा मन्त्रालयले विश्‍वास लिएको छ। त्यसको लागि सबै नागरिकहरु अत्यावश्यक काम नपरी आफु पनि घरबाट बाहिर निस्कनु हुने छैन र परिवारका सदस्य, साथीभाई, आफन्त, इष्टमित्र, छरछिमेकी लगायत चिनेजानेका सबैलाई घरभित्र नै रहनको लागि उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्‍ने अपेक्षा राखिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनको लागि गृह सचिव महेश्‍वर न्यौपानेज्यूको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले निम्नानुसारका निर्णयहरु गरेको छ।
1. काठमाण्डौं उपत्यका भित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका सबै Store एवं विक्रेताहरुले आ-आफ्ना Delivery Van मार्फत आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।
3. पसलहरु संचालन, माग संकलन र वितरण गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था महानगरीय प्रहरी कार्यालयले मिलाउने।
4. माग संकलन र वितरण गर्ने कार्यलाई सहज र व्यवस्थित गर्नको लागि सबै Store एवं विक्रेताहरुले आ-आफ्नो Toll Free Number वा अन्य नम्बर उपलब्ध गराई प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने। फोन, Online, Offline मार्फत माग संकलन गरी माग भएका आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको (Combo Pack समेत) विक्रिवितरण गर्ने।
5. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्न गराउनको लागि सबै वडा कार्यालयहरुबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था काठमाण्डौं महानगरपालिका र सम्बन्धित उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाहरुले मिलाउने।
6. काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर रहेका अत्यावश्यक वस्तुका Store एवं विक्रेताहरुले पनि उपरोक्तानुसारको व्यवस्था मिलाई आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र यस कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुले सहयोग गर्ने।
यस जटिल घडीमा कुनै समस्या परेमा त्यसको समाधानको लागि तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी जस्ता कार्यहरु गरी बजारमा आवश्यक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरुको अभाव देखिएमा यस मन्त्रालयको कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र २४ सै घण्टा उठ्ने Toll Free नम्बर ११४९ मा फोन गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १६:१९